Kedu ihe ndị ahịa na-eche maka ihu ala mgbasa ozi ọhụụ? | Martech Zone
E nwere ihe na-akpali quandry mgbe na-arịọ maka nzaghachi site na nyocha emere ichikota nke oma omume. Ọ bụrụ n ’ịjụ onye ahịa ọ bụla ma ọ bụrụ na mgbasa ozi na-amasị ha, ụfọdụ ndị ahọpụtara nwere ike ịwụli elu maka otu ha enweghị ike ịche maka mgbasa ozi na-esote popup na Facebook ma ọ bụ azụmaahịa na-esote n’oge ngosi telivishọn kachasị amasị ha. Ahụtụbeghị m onye ahụ…
N'ezie, n'ezie, na ụlọ ọrụ na-akpọsa n'ihi na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ ego. Mgbe ụfọdụ, ego ahụ na-adị ogologo oge na mmata ọhụụ ma rute ebe a na-atụghị anya nkwụghachi azụ na ego. Oge ndị ọzọ, ọ bụ mkpọsa siri ike… ikekwe mbelata… nke kwesịrị ịzaghachi nzaghachi ozugbo. Ọ bụ ezie na ndị ahịa na-ekwu na ha anaghị enwe mmasị na mgbasa ozi, ma nwee ike izere mgbasa ozi, ha na-emeghachi omume mgbe mgbasa ozi metụtara mkpa ha ma ọ bụ ihe ha chọrọ.
Nke ahụ bụ okwu ịkpachara anya mgbe ị na-enyocha nzaghachi nyocha. Nsonaazụ nke nyocha a sitere na otu Acquity na-arụ nnukwu ọrụ nke ịtụle mmeghachi omume nke ndị ahịa na ọwa mgbasa ozi ọhụụ ma e jiri ya tụnyere ọwa ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, Facebook, na-eru nso ikike nke ịkpọsa akwụkwọ akụkọ. Agbanyeghị, TV na Bipụta ka nwere ahịa maka ịchụ ndị ahịa ọhụrụ nwere ọdịnaya akpọrọ.
Ekwuru m mgbe niile na ndị na-azụ ahịa anaghị aga Facebook iji zụta ihe ọzọ ha ga-azụ, yabụ enweghị m obi abụọ na enweghị nnukwu ekele maka ọdịnaya akwadoro ebe ahụ - n'agbanyeghị na mwepu ego nwere ike ịdị irè. Yabụ… ndị ahịa anaghị eche banyere ịbanye na mmekọrịta gị na ika gị - naanị nye ha nkwekọrịta ma ọ bụrụ na ha eme ya.
Otu ndi mmadu, akụkụ nke Accenture Interactive, nyochara ndị ahịa 2,000 US na atụmanya ha maka itinye aka na mpaghara azụmahịa na-agbanwe. Ha nyochara omume ha na mmasị ha gbasara njikọ dijitalụ, ịzụ ahịa na ọrụ iji chọpụta ọnọdụ ga-emetụta ụdị na 2015 na gafere.
Ohere ndị ahụ, n'uche nke m, na-enye gị ihe ndị ahịa gị chọrọ mkpa na nzaghachi. Ọ bụrụ na ndị ahịa hụrụ na itinye aka na ika ga-enweta ihe ha chọrọ na mgbe ha chọrọ ya, ha ga-edebanye aha ha!
Download akụkọ zuru ezu - quitytù Nkọwa, Ọgbọ Azụmaahịa Ọgbọ nke 2015.
Tags: omume n'ji ahiandị ahịa chọrọmmeghachi omume nke ndị ahịaezi ndị ahịaegoFacebookgeolocationiguzosi ike n'iheọtụtụ puku afọugwo ugwoebipụtammụba mmekọrịtammelata ego
Jul 8, 2015 na 7: 07 AM
Ego m chere adịghị emetụta ihe ọrụ na facebook na twitter.
Jul 8, 2015 na 11: 23 AM
Adịghị m nnukwu onye na-ewelata ego, Paul. Ọ dị m ka ị nweta ndị ahịa na-ezighi ezi n'ụgbọ ma ị na-eweda ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dị ala. Mana nyocha na-ekwu na ndị mmadụ na-agbaso ụdị na mgbasa ozi mmekọrịta n'ihi na ha na-atụ anya ka azụmahịa, ego ma ọ bụ Kupọns.
Sep 18, 2015 na 4:16 PM
Hey Douglas, kedu ihe ị ga - asị na ụlọ ọrụ 5 kachasị elu na - enwe mmetụta na lanscape mgbasa ozi ọhụụ?
Sep 19, 2015 na 7:13 PM
Nke ahụ bụ ajụjụ na-adọrọ mmasị ma nwee ọtụtụ akụkụ ya. M mgbe nile na-ala azụ na-azọrọ "top" n'ihi na ọ bụ mkpa ka mkpa nke azụmahịa na otú ha na-ekwurịta okwu nke ọma na ha na atụmanya. N'ihi na ọhụrụ media:
Echere m na e nwere ụfọdụ mgbanwe dị ịtụnanya na-abịa na vidiyo ka m wee mepee Blab. Ikike inwe mkparịta ụka vidiyo a na-emeghe na nsonye ndị na-ege ntị bụ ihe pụrụ iche na ahụmịhe na-enye afọ ojuju.
Snapchat nwere ike bụrụ onye na-esote. N'ihi mmelite na-adịru nwa oge, ọ na-enweta azụmaahịa na ndị mmadụ ka ha pụta ìhè. Ahụ́ ruru ha ala.
Sysomo Gaze bụ ezigbo ọganihu na nlekota mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-enye ụlọ ọrụ ohere ige ntị maka ụdị ha na-egosipụta na vidiyo na ihe oyiyi karịa ka edere na ederede.
Kachasị mma bụ ụlọ ọrụ na-eji igwe mmụta ịkọ amụma ma gosipụta ezigbo ahụmịhe ndị ọrụ iji mee ka ndị ọbịa gbadata mgbatị a.
Apple nwere ikwu banyere… ọ bụghị naanị n'ihi na m bụ onye na-anụ ọkụ n'obi, mana Apple Watch bụ ọganihu na teknụzụ wearable nke na-ekwe nkwa.